'UMvikeli woMphakathi akanawo amandla okuyalela uZuma ukuba enzeni' | News24
Pretoria – Ithimba labameli bakaMengami Jacob Zuma liveze ukuthi lowo owayenguMvikeli woMphakathi uThuli Madonsela wayengenawo amandla okuba enze isiphakamiso sokuthi kusungulwe ikhomishana yophenyo mayelana nombiko we-state capture.
Ummeli u-Ishmael Semenya, utshele iNkantolo eNkulu iNorth Gauteng ePitoli ukuthi: "UMvikeli woMphakathi kumele asitshele ukuthi uwathathaphi amandla okusho ukuthi izincomo zakhe kumele ziphenywe ngomunye umuntu."
USemenya utshele uMengameli wamaJaji uDunstan Mlambo, kanye namanye amajaji okubalwa kuwo uPhillip Boruchowitz noWendy Hughes, ukuthi akukho semthethweni ukuthi uMadonsela atshele uMengameli ukuba kumele asungule ikhomishana yophenyo.
OLUNYE UDABA:URamaphosa uthi akanawo amandla okusungula uphenyo nge-State Capture
Uthi kumele zibekwe eceleni iziphakamiso ezenziwa nguMadonsela.
UMengameli uyaziphikisa lezi zincomo zikaMadonsela ngoba uMthethosisekelo uthi wumengameli kuphela onegunya lokusungula ikhomishana yophenyo.
UMengameli wamaJaji ukuvumile ukuthi yiqiniso elinganakuphikiswa ukuthi uMengameli nguye onegunya lokusungula ikhomishana.
UMadonsela wayephenya mayelana nezinsolo zobudlelwano obungalungile phakathi kukamengameli nomndeni ongomacaphunakusale wakwaGupta, nezinsolo zokuthi yiwo othatha izinqumo ngongqongqoshe abaqokelwa kwiKhabhinethi kaZuma.